Myanmar Sharing Technology: SAMSUNG GALAXY S3 (GT-I9300) အတွက် ကြည့်ကောင်းသော မြန်မာ Font
ipsw direct download link
SAMSUNG GALAXY S3 (GT-I9300) အတွက် ကြည့်ကောင်းသော မြန်မာ Font
S3 မှာ မြန်မာ font သည် အပေါ်(သို့)အောက်ပိုင်း မပေါ် ဖြစ်နေတတ်သည်။ အောက်ပါအတိုင်းပြင်လိုက်ပါ။
*** ဖုန်းသည် Root လုပ်ထားရမည်။ ***
၁။ Font ကို download လုပ်ပါ။ /sdcard/ အောက်ကို copy ကူးထည့်ပါ။
၂။ Root Explorer ကို download လုပ်ပြီး ဖုန်းထဲ install လုပ်ပါ။
၃။ Root Explorer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ /sdcard/ ထဲသို့သွားပြီး DroidSansFallback.ttf ကို copy ကူးပါ။
၄။ /system/fonts/ ထဲသို့သွားပါ။ Remount as R/W ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Paste ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ overwrite လုပ်မှာလားလို့မေးရင် yes ကိုနှိပ်ပေးပါ။
၅။ ဖုန်းရဲ့ Setting > Display > Font style > Dafault Font ကိုရွေးပေးပါ ။ ဖုန်းကို restart ချလိုက်ပါ။
ရေးသားသူ » » chon shi
aung phay December 29, 2012 at 9:34 AM
ကျွန်တော့်ဖုန်း galaxy tab27.0 plus မှာမြန်မာစာဖတ်ရတာအခက်အခဲရှိနေပါသည် ကူညီပေးပါ
chon shi January 1, 2013 at 10:28 PM
ဘယ်လို အခက်အခဲ လည်း ????
Min Thein Htike February 11, 2013 at 12:21 PM
Samsung Galaxy S3 GT I9300 မှာ R/Wကို R/O ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
chon shi February 12, 2013 at 7:48 AM
အောက်က root expplorer ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပါ
naing linn May 12, 2013 at 12:55 PM
အစ်ကိုရေ......အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ....ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ပညာကို ဒီလို share ပေးတဲ့အတွက် လေးစားပါတယ်...
ဤ site ၏ QR Code
စာမျက်နှာကို PDF အဖြစ်သိမ်းချင်လျှင် ...
Get up to 50GB of free online space
Media Fire have new feature call "fileDrop". If you need to collect files from friends or clients? Make the folderaFileDrop and you'll be able to send themalink to special page where they can upload files directly into this folder. The rest of your files are kept private and uploaded files are only visible to you. You'll also get an optional special widget that you can embed on your website.It's super easy, It's private and secure, it's free, try it out!
Dropbox ရဲ့ Free Online Storage ကိုယူရအောင်
မိမိ Data တွေကို တိမ်ပေါ်တွင် သိမ်းထားပြီး ရောက်ရာအရပ်မှ ခေါ်သုံးတယ်။ စသုံးသူကို 2GB ပေးတယ်။ free အနေနဲ့ 50GB ကျော်အောင်ရနိုင်တယ်
360 yunpan (cloud storage) unlimited
360 yunpan ရဲ့ cloud storage storage ပါ ။ site တွင် ပုံမှာ အနီရောင်နဲ့ ကွင်းထားသော စာသား ရှိနေသေးလျှင် pc မှာ ၎င်း၏ app နဲ့ sing in လုပ်လိုက်လျှင် 10TB ပေးတယ်။ နောက်တဆင့် အနေနဲ့ mobile phone မှာ၎င်းရဲ့ app နဲ့ sing in လုပ်လျှင် နောက်ထက် 26TB ထပ်ပေးတယ်။ 25 level အောက်အတွက် စုစုပေါင်း (36TB) ရတယ်။ level တိုးလျှင် storage ထက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ offline download စနစ်လဲ ပါတယ်ဗျ ။
(*.ipsw) Direct Download Links
Apple စက်ရဲ့ firmware ကို update လုပ်ရန်
Movie တွေကို download လုပ်ချင်လျှင် ...
MST မှ Android App များ
မြန်မာ သတင်းများကို Android ပေါ်တွင်ကြည့်ရန်
Name : MMNews v1.2.apk
Model ပုံများကို Android ပေါ်တွင် ကြည့်ရန်
Name : com.mst.mmmodels.apk
တင်ထားသော Blog များကို Labels ဖြင့်ရှာရန်
Android Root and Firmware Update
Android SDK နှင့်ပတ်သက်သော
Mobile ဖုန်းအတွက် လျို့ဝှက် code များ
Model ပုံများ (Android) _ Direct Download Link
မြန်မာ Model ပုံများ (Android)
Google Chrome Browser ကို myanmar font မြင်စေရန်
Jailbreak iOS7တွင် Myanmar Font နှင့် Keyboard ကိုသွင်းနည်း
Huawei G510 Myanmar Font Theme (Emotion UI)
အခြား site မှသတင်းများ
Redmi 3x ကို Mi Account Lock ဖြုတ်ပြီး Wifi & Bluetooth Error ပါဖြေရှင်းနည်း - Xiaomi ရဲ့ model တစ်မျိူးဖြစ်တဲ့ Redmi 3x ကို Mi Account Lock ဖြုတ်ပြီး Wifi နဲ့ Bluetooth Error ကိုပါ ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလေးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတ...
MPT မှ IP-VPN ဝန်ဆောင်မှု စတင်တော့မည် - *အရည်အသွေးမြင့် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးများအတွက် * *ကွန်ရက်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးရရှိနိုင်ပြီ* (ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခု...
Myanmar Sharing Technology @ 2012. Ethereal theme. Powered by Blogger.